OweseMtuba ezinhlelweni zokubuyisa isithunzi kwezemidlalo – Sivubela intuthuko Newspaper
IMeya yomasipala uMtubatuba uVelangenkosi Gumede uthi ufuna ukubuyisa esithinzi ebholeni kulendawo
IMEYA ku masipala waseMtubatuba enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natali uCllr Velangenkosi Gumede uthi bafuna ukubuyisa isithunzi sale ndawo kwezikanobhutshuzwayo ngokuthi bakhiqize abadlali abazobonakala esigabeni esikhokhelwayo.
“Ukuthuthukisa ibhola kungezinye zezinto esizibeke eqhulwini njengoba sethula uhlahlo mali lukamasipala lwalo nyaka. Kunemali esiyibekele ukuthuthukisa ibhola kwintsha esakhula,” kusho uGumede.
Indawo yaseMtubatuba ingenye yezindawo ehamba phambili ngokukhiqiza ikhono emdlalweni wamankomane njengoba isikhiqize amabhokisa anjengo Innocent “Tycoon” Mantengu, Sboniso Gonya kanye nabanye abaningi.
Lo masipala ubeke imali elinganiselwa ku-R500 000 wezinkulungwane zamarandi ozosetshenziswa kwiMayoral Cup. Ngaphandle kwalo mqhudelwano kuzophinde kubizwe labo abahlonza ikhono ebholeni abavela ezigabeni ezikhokhelwayo ukuze intsha ikwazi ukuzibonakalisa phambi kwabo.
“Sifuna kuphume abadlali lapha abazogijima emaqenjini amakhulu ezigabeni zebhola elikhokhelwayo. Siyazi ikhono likhona kuphela lidinga ukuvezwa, kuyishwa ukuthi uMtubatuba umkhulu kangaka akekho umdlali ogijima esigabeni esikhokhelwayo, ” kuphethe uGumede.
Lokhu kushayelwe ihlombe abaningi ngemali ezotshalwa ukuthuthukisa ibhola kule ndawo. Le midlalo ibaminyaka yonke ngenyanga uNcwaba
UTHANDO LWEBHOLA LUMENZE WATHENGA IQEMBU